July 2019 - Online Bunner
ထီဖွင့်ဖို့ ရက် နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
July 31, 2019 Online Bunner 0
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော် ထီဖွင့်ဖို့ ရက် နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ…. ဒါကြောင့် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း […]
ဘဏ်ကို ငွေအပ်ပြီး အတိုးနဲ့ ထိုင်စားမယ် စိတ်ကူးထားသလား?
ဘဏ်ကိုိ ရှိသမျှ ငွေတွေအပ်ပြီး အတိုိးနဲ့ ထိုင်စားမယ်ဆိုတဲ့ အကြံက အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား? လူလတ်တန်းစား မိသားစုတစ်ခုအတွက် လစဉ် Financial freedom တစ်လ ၁၅ သိန်း ဝင်ငွေရဖို့ ဘဏ်အပ်ငွေ သိန်း ၂၀၀၀ကျော် ရှိဖို့ တွက်ပြတာလေး မြင်လိုက်တယ်… တွေးမိတာက … တစ်လချင်းဝင်ငွေ […]
အာရုံကြောအားနည်ခြင်း၊ခေါင်းကချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊၀မ်းချုပ်မူးဝေခြင်း အတွက် ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့််ပါ
ကျွန်တော် အာရုံကြောအားနည်း ခေါင်းချွေးတအားထွက် ဝမ်းချုပ် မူးဝေတာတွေတော့ အခုဘာဆေးမှ သောက်စရာမလိုလောက်အောင် ဒီပျားသံပုရာကို လုပ်စားကြည့်လာတာ အတော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီ ခေါင်းချွေးများထွက်လာပီဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်မိတာ ပျားရည်တော့စစ်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ် အရမ်းကောင်းတယ် မနက်အိပ်ယာထချင်းပျားသံပရာစားပြစ်တယ် မုန့်ှဟင်းငါး ငံပြာရည်ချက် ငပိရည် အခုအကုန်စားတာ သွေးတိုးချင်း မရှိတော့ဘူး တအားတော့မစားနဲ့ပေါ့ နော် မျှဝေပေးပါ လက်တွေ့ကောင်းတယ် […]
အမျိုးသားများနဲ့ အကြိမ် (၂၀၀) ကျော် ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက် ခွေးလေးကိုပဲလက်တွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးက ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလည်းဆိုတာ နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ လက်ထပ်တဲ့သူတွေလည်း အများအပြားပေါ်လာနေပါပြီ။ အဲလိစ်ဇဘတ်ဟုဒ် လို့အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း သူမရဲ့ အိမ်မွေးခွေးလေးနဲ့ မကြာသေးမီကပဲ တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ သူမတို့ လက်ထပ်တဲ့ တရားဝင်ရုပ်သံကို This Morning မှတစ်ဆင့် Live လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ မြင်တဲ့သူတိုင်ကလည်း သူတို့ ဘာကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို […]
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံး နေဝင်ချိန် ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့သူ
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ လူ့လောကမှာသူ့ကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီး (၅) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့ဖခင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ဖခင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သူ့မိခင်က အလုပ်ထွက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ (၁၂) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့မိခင်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။ သူ့ပထွေးရိုက်နှက်နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကို နောက်ကွယ်မှာခံခဲ့ရတယ်။ (၁၄) နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းတက်ဖို့လဲပိုက်ဆံမရှိ၊ မိဘအိမ်မှာလည်း မနေချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် […]
မိန်းကလေးတွေ အထိတွေ့ ခံချင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ချစ်သူတွေ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့ အတူ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆိုရင် သူတို့ကို ထိတွေ့စေ ချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိသတဲ့ ။ အဲဒီလို ပြောလို့ ထင်ရာမြင်ရာတွေ လျှောက်တွေး မနေနဲ့ဦး။ ဒီအချက်တွေက bigeye.ug ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုိက်နဲ့ faceofmalawi.com […]
အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ..
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက တက်ခဲ့တဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်းရဲ့ ဘေးမှာ အစိုးရ သစ်စက်ဝင်းကြီး ရှိတယ်။သစ်စက်ဝင်းရဲ့ အနောက်ထဲမှာ ၀န်ထမ်း တန်းလျားကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီ ၀န်ထမ်း တန်းလျားမှာ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ရှိကြတော့ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တယ်။သစ်စက်ဝင်း ၀င်ပေါက်က လူတကာ ပေးမ၀င်ဘူး။ အဲဒီတော့ […]
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်တွင် တိုက်ခန်း ၄ လွှာထိ သူခိုးဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား မိမိနေအိမ်တိုက်ခန်း လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။ကျနော်တို့ တိုက် ၄ လွှာမှာ သူခိုးဝင်ပြီး လူသတ်သွားပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီမှာ နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်က ဝင်လာပြီး ယောက်ကျား ကို ဓားနဲ့ ထိုး အသေသတ်ပြီး […]